Deg deg:Hodan Cabdiraxman oo laga duubay cod sir ah oo ay ku shaacisay sir culus. - xog baahiye
Hodan Cabdiraxman oo horay ugu guuleysatay inay hantido qalbiga Mursal muse, ayaa muuqaal ay barteeda snapchat soo gelisay ku shaacisay inay aad uga xuntahay, in hablaha qaar ay isku howlaan inay hantiyaan seygeeda ayagoo usoo maraya waddooyin halis ah. waxeey goor sii horreysay si toos ah u weerartay hablaha qorsheynaya inay ka dhex shaqeeyaan ayada iyo seygeeda,Mursal muuse.
AKHRISO: Deg deg: Najmo Nashaad oo oohin afka furatay,sheegtayna arrin halis ah.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo xaqiijiyay, in Hodan ay aad uga carrootay Mursal kadib markii ay ogaatay inuu hablo kale shukaansado islamarkaana uu diyaar u yahay inuu xiriirkooda soo af-jaro.
waxaan si hoose u ogaannay in Hodan ay codad sir ah oo ay asxaabteeda u dirtay inay si xun ugu aflagaadeysay Mursal.
AKHRISO: Deg deg:Hodan Cabdiraxman oo arrin halis ah qabsatay kadib tallaal ay qaadatay.
Dhanka kale, xogo hoose ayaa waxaan ku ogaannay in Mursal Muuse uu qorsheynayo in uu gebi ahaanba iska fasaqo hodan Abdiraxman.
codadka sirta ah ee laga duubay hodan oo innoo suura galin inaan idin la wadaagno, ayaa waxaa lagu faafiyay barta Whatsapp inkastoo durbadiiba hawada laga saaray.
lama hubo cidda ka dambeysa faafinta siraha hodan abdiraxmaan, balse waxeynu goor dhow isku dayi doonnaa inaannu ogaanno cidda ka dambeysa.
AKHRISO: Deg deg: sharma boy oo walwal soo foodsaaray kadib marki loosheegay arin layaab kunoqotay.